Umatshini wokuthunga umbona,ingqolowa,paddy
Xa ingqolowa,irhasi, isisu,paddy irayisi okanye ezinye ingqolowa ziyavunwa, iinkozo kufuneka zahlukane nezinye izityalo ngaphambi kokuba zisetyenziselwe ukwenza umgubo. Inkqubo yokwahlula ibizwa ngokuba kukubhula. Kwezolimo kwanamhlanje, ukubhula kwenziwa ngoomatshini ababizwa ngokuba ngumatshini wokudla okuziinkozo., irayisi, isisu, irhasi, Millet, njl. Umatshini wokudumba we-sorghum usebenza kwaye unokubhula ngokupheleleyo irayisi kunye nengqolowa. Umatshini wokutswina i-sorghum unezimpawu zokwakheka komatshini,ubume obuhle kunye nokusebenza okuqinisekileyo, Umgangatho wemveliso ephezulu,ukusebenza okuhle kokubhula kunye nokulahleka okumbalwa kwengqolowa njl. njl. Umatshini wokukhulisa irayisi yenye yeemveliso zethu ezithandwayo ezinetekhnoloji evuthiweyo. amabele i-sorghum iluncedo oluncedo kubalimi.sinolunye uhlobo isetyenziselwa ukugcina ukutya okuziinkozo ilungile ukhetho lwakho!
Umatshini wokuguba i-sorghum thresher wenza iiracks, screen concave, isigubhu, ikhava, umlandeli ophambili, yesibini fan fan, imoto okanye idizili, Iscreen eshukumayo, isixhobo esenziwe ngumkhondo kunye nokunye. Iqonga elisebenzayo elenziweyo lenza likhuseleke kwaye lihlala ixesha elide.
Iimpawu zomatshini we-sorghum thresher
1.Ukusebenza okuphezulu: Lo matshini we-sorghum thresher udibene nokusebenza kunye nokwalusa ngokwahlukeneyo ukuze iinkozo, ingqolowa, ingca yengqolowa yayiya kwahlukaniswa kwaye icocwe ngaxeshanye. Inokucoca izityalo ezahlukeneyo ngokusebenza okuphezulu, hlula iileks kwaye ususe uthuli kumxube wokuvelisa.umthamo womatshini wokukhula okuziinkozo unokufikelela kwi-2000 ~ 2200kg / h.
2.Umgangatho onokuthenjwa: umatshini wethu we-sorghum thresher ubalaseliswa ngesakhiwo se compact, ukusebenza okulula, ukugcinwa okulula,uyilo lwenzululwazi kunye nomgangatho ophezulu. Ngaphandle koko, Yintsholongwane, anti-rust, kunye nokufuma kuqinisekisiwe. Izabelo zikumgangatho ofanelekileyo, Isalathiso ngasinye sifikelele kwisizwe.
3.Ukugcina iindleko: Umatshini wokubhula i-sorghum unezibonelelo zokukhupha okuphezulu kunye nokuqhekeka okuncinci, enceda ekuvuneni kwaye iphinde inciphise ilahleko yasemva kokuvuna kwaye igcine iindleko zabasebenzi ngaxeshanye.
4.Ukhuseleko oluphezulu: Ulawulo lweemoto luxhotyiswe ngezinto zangoku, ukugcwala okuphezulu kunye nokukhuselwa kwesekethe okufutshane.
5.Amandla afumaneka ngokubanzi, njengemoto, injini yedizili,ke lo matshini wokudla okuziinkozo uthandwa eAfrika ,ngakumbi indawo yokunqongophala kombane.
Wamkelekile ukuba uthenge.
Iiparamitha zobugcisa kumatshini wokukhula okuziinkozo
(kw / hp) 11kwimoto